Ntuli aka UNWTO mere naanị Alain St. Ange ka ọ bụrụ nde mmadụ
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » Ntuli aka UNWTO mere naanị Alain St. Ange ka ọ bụrụ nde mmadụ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Alain St. Ange nwetara nkwado site n'aka minista ya ka ọ sonye na ntuliaka UNWTO
Ihe a niile bidoro na ndetu obi ụtọ na Machị 23, 2017 na Berlin na ITB Function, mgbe Minista njem nlegharị anya nke Seychelles Loustau-Lalanne kwadoro onye bụbu Minista St.Ange dị ka onye ndoro-ndoro ochichi agwaetiti maka UNWTO n'ihu Taleb Rifai onye na-apụ apụ. UNWTO SG.
Akụkụ buru ibu nke ụwa dị n'otu n'ịghọta ntuli aka UNWTO maka Seretary na 2017 ekwubighi n'ụzọ o kwesịrị. A kọrọ wayo, nrụrụ aka, nrụrụ aka na ọtụtụ ihe ndị ọzọ n'oge usoro ịchekwa ọnọdụ onye odeakwụkwọ UNWTO ugbu a Zurab Pololikashvili
Otu n'ime ndị na -azọ ọkwa ahụ n'oge ahụ bụ Maazị Alain St. Ange. O wereghị ihe mere ya dịka ihe enyere. Afọ anọ ka e mesịrị, ụlọ ikpe mkpegharị ikpe kacha elu na obodo ya bụ Seychelles nyere ya nde nde Seychelles Rupies ma ọ bụ ihe ruru $ 4 na mmebi na Thursday a.
Ọtụtụ ndị nọ n'ụwa ugbu a na -ajụ ka UNWTO gaara aga n'ihu na nsogbu COVID a na onye isi dị iche na -elekọta ya?
The UNWTO n'ezie ọ ga-abụ nke a na-ahụ anya nke ukwuu, enyi na enyi maka mgbasa ozi, yana mepere emepe maka ụlọ ọrụ onwe yana gọọmentị niile so na ụlọ ọrụ jikọtara UN.
St. Ange gbara akwụkwọ na Seychelles n'ọnwa Ọktoba 2017 mgbe gọọmentị nke aka ya mechapụrụ ya ịzọ na ntuliaka UNWTO. Ọ nwere obi ụtọ ụbọchị 2 tupu ntuli aka n'oge nzukọ Executive Council nke UNWTO na Madrid. Ọ bụ ihe a na-atụghị anya ya na ọ bụ isi ihe ihere nye onye ndọrọndọrọ St. Ange, ndị na-akwado ya, na onye bụbu odeakwụkwọ ukwu Rifai na ọtụtụ ndị ọzọ.
O kwuru okwu na -emetụ n'obi tupu ntuli aka e nyeghị ya ohere ịsọ mpi ọzọ.
Okwu mmetụta mmụọ nke Alain St Ange na UNWTO Executive Council na 2017 ka emechara ya onye nhọpụta UNWTO
Alain hụrụ ndị nta akụkọ n'anya, ọ hụrụ ndị mmadụ n'anya ma bụrụkwa nnukwu onye na -akwado njem nkeonwe na ụlọ ọrụ njem. Mgbe ọ bụ minista njem nlegharị anya nke Seychelles ọ malitere Victoria ejị, ihe omume nke butere mmemme oriri na ọ visitorsụ andụ na ndị ọbịa si n'akụkụ ụwa niile na steeti agwaetiti a. Carnivals, nke si na Trinidad, Nottingham, Cologne ruo Rio de Janeiro na Seychelles ka na -ekwu maka ya.
Ọ bụ ihe nwute, St. Ange enweghị ohere ịme ntuli aka site na mba ndị otu UNWTO.
Afrịka na -enweta mkpirikpi mkpanaka bụ ihe kacha echegbu onwe ya n'oge ntuli aka, ọ ghọrọ eziokwu dị mwute dịka ọtụtụ siri kwuo.
Laa azụ na 2017, ndị isi Afrịka abụọ nọ na-agbalị iweta Afrịka n'ọkwa njem nlegharị anya nke ụwa: Dr. Walter Mzembi, onye minista njem nlegharị anya Afrịka kacha ogologo oge n'oge ahụ site na Zimbabwe, na Alain St.Ange si Seychelles.
Ndị otu mba Afrịka kwadoro Dr. Mzembi dịka onye ga -azọ Afrịka, nke Seychelles kwadoro n'oge ahụ. Site na mmadụ abụọ si Africa, ohere Africa nwere ikenye otu nke ha dịka odeakwụkwọ ukwu ghọrọ ezigbo ihe ịma aka.
Zimbabwe n'okpuru Onye isi ala Mugabe kpaliri ndị otu Afrịka ịmanye ndị Seychelles ka ha ghara ikwe ka Alain St.Ange gbaa ọsọ. Nrụgide dị na Seychelles dị ukwuu ma yie mmachibido iwu nke Africa.
Gọọmentị Seychelles nyere n'ime nkeji ole na ole tupu ntuli aka ma jiri ike wepụ St.Ange na ntuli aka ahụ.
Nke a bụ nnukwu ihe ihere maka onye ndọrọndọrọ St. Ange, kamakwa maka UNWTO, na iguzosi ike n'ezi ntuli aka. Ọ bụ ihe nwute, nke a bụ naanị otu n'ime ọtụtụ nsogbu nke mmepe na-eyi egwu nke mechara gosi onye ntuli aka Georgia dị ka odeakwụkwọ ukwu maka UNWTO General Assembly na Chengdu, China.
Afrịka nwere mkpanaka mkpirisi site na mbido, bido na 2017 mgbe eTurboNews dere, sị: Otu ihe na -esi isi na Madrid.
N'ikpeazụ, Mzembi rutere na ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ ma Zurab Pololikashvili meriri ya. Akwụkwọ a kọrọ akụkọ gbasara Zurab na -eme egwuregwu rụrụ arụ na ihu ọma na nkwa a na -enyo enyo iji nweta ntuli aka ya.
Alain St.Ange gbara uzo nke ya maka onodu UN Secretary General
Alain St.Ange chere na gọọmentị nke ya mesoro ya mmeso ọjọọ ma kwụsịkwa ikwu isi ihe ya. Ọ gbara gọọmentị ya akwụkwọ ikpe wee merie. Mgbe o merisịrị ikpe ya, etinyere akwụkwọ mkpesa ma ugbu a ọ meriri karịa. Ihe a niile mere na Tọzdee, ụnyaahụ.
Ụlọikpe Kasị Elu nke Seychelles ekwupụtala taa (Ọgọst 12, 2021) ikpe maka okwu minista njem nlegharị anya, Alain St.Ange.
Kedu ihe kpatara Alain St. Ange ga -eji nweta nde nde asaa maka ntuli aka UNWTO furu efu?
St.Ange, onye gbasiri mbọ ike maka ọkwa nke butere nnukwu mfu ego na usoro na-agbalị ime onwe ya onye odeakwụkwọ ukwu nke UNWTO nke Afrịka.
Gọọmentị Seychelles kpebiri mkpebi ịwepu nhọpụta ya mgbe ndị otu mba Africa butere nrụgide siri ike nke na -eyi egwu mmachi akụ na ụba.
Ya mere, onye isi ala Seychelles kagburu nhọpụta nke St.Ange mgbe ọ na -abịa nzukọ ọgbakọ ndị isi UNWTO na Madrid, ụbọchị abụọ tupu ntuli aka.
Mgbe St.Ange laghachiri n'ụlọ ọ gara ụlọ ikpe wee gosipụta ya na Courtlọikpe Kasị Elu, nke Onye ọka ikpe Melchior Vidot na -elekọta, mgbe e nyere ya ntaramahụhụ na nchikota Rs164,396.14 cents (ihe dị ka US $ 12,366).
Ego a emechaghị kpuchie mmefu St.Ange tinyere na mgbasa ozi maka ntuli aka a. Ọ gwara ndị ọka iwu ya ka ha rịọ arịrịọ maka naanị mmebi nke ihe mebiri. Ọ gbakwụnyere ihe mgbu, mmechuihu, na mmebi uche nke ihe ahụ kpatara ya.
Ka ọtụtụ afọ gachara, emechaala okwu a n'ihu Ụlọikpe Mkpegharị Ikpe, ụlọ ikpe kacha elu na Seychelles. Ọ bụ ezie na onye ọka iwu na-arịọ arịrịọ, na ịrịọ arịrịọ, ka ewepu ikpe a n'ozuzu ya, St.Ange arịọla arịrịọ megide kwantum.
O kwuru hoo haa na nchikota e nyere n'Ụlọikpe Kasị Elu ezughị ezu iji kpuchie ụgwọ ịgba akwụkwọ ya, mana ọ nweghị ihe ọ ga -akwụ ụgwọ maka nnukwu mmefu o megoro n'oge mgbasa ozi ya.
Onye ọka iwu na-ahụ maka ịrịọ arịrịọ nwara, ma ọ nweghị isi, ịrịọ arịrịọ na ekwesịrị idobe gọọmentị n'ụkpụrụ dị iche karịa ka nwa amaala na-eme omume aghụghọ.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na arụmụka ha ga -aga nke ọma, ọ ga -enwe mmetụta nke ime ka o siere nwa amaala ike iweta ọchịchị obodo megide Ọchịchị. N'ịbụ otu n'ime ụdị ndị mbụ na ikike anyị, ikpe St.Ange taa nwere mmetụta na -esochi ikpe: ịgbasa ohere maka ụmụ amaala ịgbagha mkpebi nke ngalaba Executive nke gọọmentị mere.
Courtlọ ikpe ụnyaahụ mụbara ihe nrite maka St.Ange ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde rupees 7, na-akwụghachi ọtụtụ mmefu ego ya n'akpa n'oge ọ na-eme mkpọsa.
Nchịkọta a gụnyere nde rupees 1 na mmebi omume, otu n'ime ego kachasị elu a ga-enye na ikike anyị maka mmebi na-abụghị ego ruo taa.
O doro anya na nke a ga -abụ akara ngosi mara mma maka ndị na -azọrọ na -aga n'ihu n'ihe ndị yiri ya.
A hụrụ Maazị St.Ange, n'ụzọ kwere nghọta, na-ahapụ ụlọ ikpe ụnyaahụ na mmụọ dị mma mgbe afọ anọ na-alụ ọgụ n'okwu na-emegide ya, ya na ndị otu ọkaibe nke Seychellois, gụnyere Maazị Kieran Shah, MrsMichelle St.Ange-Ebrahim, na Mazi Frank Elizabeth.
Maazị Stephan Knights nọchiri anya steeti ahụ. Ọ bụ ezie na Maazị St.Ange na-akparịta ụka nke ọma, dịka ọ na-adị, ya na ndị nta akụkọ gbakọrọ, Ọ nweghị onye ọkaiwu ukwu kwuru.